ANKARAMENA - RN7 : Fiara mpitondra solika nahatrarana rongony milanja 700kg
Omaly maraina, tokony ho tamin’ny dimy ora tany ho any, tra-tehaky ny zandarimaria avy ao Ankaramena, any amin’ny lalam-pirenena fahafito iny indray ny rongony nafatratra tamin’ny gony marobe, noentina fiara mpitondra solika iray. 16 mai 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray, eo amin’ny manodidina ny 700 kilao eo ho eo ireo rongony tratra tao, izay nafatratra tamin’ny gony 30 isa. Olona miisa 3 kosa ny tao anaty fiara nitondra azy ka notanana tao amin’ny biraon’ny zandary avy hatrany izy ireo hatramin’ny omaly mba hanatanterahana fanadihadiana. Fantatra tamin’izay fotoana izay fa tao Ihosy no nandraisan’izy ireo izany ary saika nokasaina hoentina hiakatra an’Antananarivo.
Raha tsiahivina, nahitana tranga mitovy tsy misy valaka tamin’ity ihany koa tao Ihosy, ny volana marsa lasa teo iny. Rongony 20 gony milanja 300 kg no nafenina tao anaty kamiao mpitondra solika avy nanatitra solika tany Toliara tamin’io fotoana io. Efa tra-tehaky ny zandary ireo olona miisa roa tompon’antoka tamin’izany. Mipetraka eto ny fanontanian’ny mpanara-baovao ny amin’ny hoe : iza marina ireo olona ambadika mpanao ity afera maloto ity, izay atidoha manaparitaka ireo zava-mahadomelina ireo, any amin’ny Faritra Atsimo iny ?
Betsaka ireo mametraka ny ahiahy fa mety ho tambajotra iray ihany no manatanteraka ity tranga niseho sy ny tamin’ny volana marsa lasa teo iny saingy arahina akaiky ny valin’ny famotorana ataon’ireo zandary. Ny mahagaga mantsy dia saika ao Ihosy hatrany no nahitana fanaparitahana zava-mahadomelina misesisesy aman-taonany maro izay. Eo anatrehan’ izany indrindra dia hentitra ireo mpitandro filaminana misahana ny fifamoivoizana amin’ny fanaraha-maso akaiky ireo fiara mivezivezy. Mitohy hatrany kosa ny famotorana lalina ireo olona efa voasambotra, etsy andanin’izay dia mangataka fiaraha-miasa amin’ny olon-tsotra hatrany ireo zandary ho fanamorana ny fisamborana ireo olon-dratsy.